Nike + Run Club update: anyị nwere ike ịga maka ọsọ naanị Apple Watch | Esi m mac
Nike + Run Club update: anyị nwere ike ịga maka ọsọ naanị Apple Watch
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Apple Watch, Noticias, ọtụtụ
Mmekọrịta dị n'etiti Apple na Nike banyere nkwonkwo nkwonkwo na ngwa Apple Watch na-agba ọsọ na-akwụ ụgwọ. Ruo ugbu a, ụfọdụ ọrụ nke ngwa chọrọ ka iPhone gbaa ọsọ. Mana lNgwa ahụ etoola ma ọ chọghị ịdabere na iPhone. Ya mere, iji Apple Watch anyị na-agba ọsọ na-adịwanye ka elele anya nke ụdị ndị ọkachamara pụrụ iche n'ịgba ọsọ na egwuregwu nke ụdị niile. Na mmelite ohuru nke Nike + Run Club, na-enye anyị ohere ịlele anya, ọsọ na oke ndị ọzọ, na-enweghị na-ebu iPhone na gị.
Ojiji a ka kacha dị mfe ma kensinammuo. A na-egbu ọrụ nke ngwa ahụ n'enweghị ekwentị Apple. Ugbu a, anyị nwere ike igosi ọkwa nke ọ bụla ma ọ bụ oge agba ọsọ, naanị site na ịpị ugboro abụọ na Apple Watch. N'ụzọ dị iche, ọrụ nchịkwa olu na-achọ ma ọ dịkarịa ala iPhone maka ugbu a.
Ozi mmelite ngwa ahụ na-agwa anyị ihe ndị a:
Nke a bụ ihe ọhụrụ na mbipute 5.7.0 ebe anyi no oru. Legodi nkwalite ndị kachasị ọhụrụ anyị:
Ọsọ ọsọ abiala. Nwere ike ugbu a akara etiti oge na laps iji iji ọsọ na-agba ọsọ atụmatụ gị nche - a abụọ tap na isi ihuenyo n'oge na-agba akara akara etiti oge
D mKPA: Ọ dị mkpa inye ikike NRC ịnweta Motion y Mma Arụ Ọrụ iji soro ọsọ ahụ
Maka nsonaazụ kacha mma na Apple Watch, a na-atụ aro ka ị jiri watchOS 3.2.2 ma ọ bụ karịa.
Tụkwasị na nke a, e meziri nchinchi ma tinyekwa mmelite ọhụrụ.
Maka mmelite ndị ọzọ na ndụmọdụ, gaa na nrc.nike.com
Anyị nwere mmelite ọhụrụ dị na ụlọ ahịa ngwa, maka elekere Apple ọ bụla, Apple Watch Series 2 na n'ezie, Apple Watch Nike +. Na usoro 1 ọ ga-ekwe omume imelite, mana anyị ga-enwerịrị iPhone na anyị dịka ọ na-enweghị GPS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nike + Run Club update: anyị nwere ike ịga maka ọsọ naanị Apple Watch
Adị m ọhụrụ ebe a.
Mgbe anyị ji oge ịgba ọsọ gafere, a na-agụ ndị nke ọzọ dị ka otu nkeji oge ka ọ ga-akwụsị ịgba ọsọ ahụ?
Chepụta akwụkwọ edemede pụrụ iche na nke izizi nwere ndebiri 220 maka naanị otu euro
Apple na-eweputa atụmatụ ndebanye aha kwa afọ nke Apple Music nke anyị na-azọpụta euro 20